नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई उपयोगी जानकारी – onlinedarpan: – purnakhabar.com
नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई जानकारी
मोबाइलको ब्यालेन्स थाह पाउँन *400# डायल गर्नुहोस ।
आफ्नो मोबाइल नम्बर थाह पाउँन *9# डायल गर्नुहोस ।
कल फरवार्ड गर्न **21*98xxxxxxxx फरवार्ड गर्न चाहेको नम्बर# डायल गर्नुहोस ।
कल फरवार्ड क्यान्सिल गर्न ##002# डायल गर्नुहोस ।
कल वैटिंग सेवा सुचारु गर्न *43# डायल गर्नुहोस क्यान्सिल गर्न #43# डायल गर्नुहोस ।
मोबाइलमा FNF सेवा सुरु गर्न पहिलो पटक FNFSUB*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस अन्य ४ वटा नम्बर थप गर्न FNFADD*98XXXXXXXX लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
प्रिपेड मोबाइलबाट अर्को नम्बरमामा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न*422*SECURITY CODE*98xxxxxxxx.*RS# डायल गर्नुहोस ।
 आफ्नो पोस्टपेड मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन टेलिफोनको मासिक बिल, बाँकि रकम, अग्रिम रकम आदि हेर्न www.http://gsmbl.ntc.net.np/ मा login गर्नुहोस ल्यान्डलाइन को लागि AC Number (मासिक महशुल तिरेको बिलमा लेखेको हुन्छ ) र मोबाइलको लागि PUK नम्बर राखेर हेर्न सकिन्छ ।
 आफ्नो मोबाइल नम्बरको सेकुरिटी कोड प्राप्त गर्न SCODE लेखेर पुक कोड प्राप्त गर्न PUK लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस।
 पोस्टपेड मोबाइलमा ISD सुबिधा थप्न #331*0000#डायल गर्नुहोस सुबिधा हटाउन *331*0000# डायल गर्नुहोस ।
डाटा प्याक तथा भ्वाइस प्याक सम्बन्धि नयाँ नयाँ अफर थाह पाउँन *1415# डायल गर्नुहोस ।
डाटा प्याक खरिद गर्न *1415*1# डायल गर्नुहोस ।
भ्वाइस प्याक खरिद गर्न *1415*4# डायल गर्नुहोस ।
बाँकी डाटा र भ्वाइस प्याक थाह पाउन *1415*5# डायल गर्नुहोस ।
मोबाइलमा CRBT राख्न *1455# डायल गर्नुहोस र प्राप्त निर्देशन अनुसार गर्नुहोस । अथवा crbt कोड छ भने SUB स्पेस crbt code लेखेर 1455 मा म्यासेज गर्नुहोस ।
मोबाइलमा CRBT हटाउन UNSUBलेखेर 1455 मा म्यासेज गर्नुहोस अथवा *1455#डायल गर्ने * लेखेर पठाउने,अनि 8 लेखेर पठाउने अनि अन्तमा सुनिस्चित गर्न 1 लेखेर पठाउनुस।
नमस्ते CREDIT सेवा सुचारु गर्न – आफै हुन्छ।
 नमस्ते CREDIT सेवा बन्द गर्न STOP लेखेर 1477 मा SMS गर्नुहोस ।
मिस्डकल नोटिफिकेसन (अलर्ट) सेवा सुचारु गर्न *1400# डायल गर्नुहोस या sub mca लेखेर १४०० मा sms गर्नुहोस ,सेवा बन्द गर्न unsub mca लेखेर sms गर्नुहोस ।
ल्याण्डलाइन टेलिफोनको तिर्नुपर्ने बिल रकम थाहपाउँन CB*065XXXXXX (पुरा टे.न.)लेखेर 1415 माSMS गर्नुहोस।Due amount भनेको तिर्नुपर्ने रकम हो available credit भनेको फोन गर्न मिल्ने बाँकी रकम हो
ADSLको अन्तिम मिति थाहपाउन VL*NTADSL065XXXXXX(पुरा टे.न.)लेखेर 1415मा SMS गर्नुहोस ।
ADSLको ब्यालेन्स थाह पाउन BL*NTADSL065XXXXXX (पुरा टे.न.)लेखेर 1415 मा SMS गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको नम्बर इनक्वारी सेवाको लागि १९७ मा फोन गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल ग्राहक सेवाको लागि १४९८ मा फोन गर्नुहोस ।
ल्यान्डलाइन टेलिफोन मर्मतको लागि १९८ मा फोन गर्नुहोस ।
नेपाल टेलिकमको बिबिध सेवा बारे जानकारी लिन तथा ब्यालेन्स तथा बाँकि डाटा जानकारी लिन NEPAL TELECOM( नेपाल टेलिकमको अफिसियल एप्लिकेसन्) मोबाइलमा डाउनलोड र रजिस्टर गर्नुहोस ।
मोबाइलमा टेलिभिजन हेर्न WOWTIMES एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस ।
थप जानकारीको लागि’ नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा login गर्नुहोस ।
जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोस ।
भूकम्पले ध्वस्त जिरी बजारले लियो नयाँ स्वरुप
१ कात्तिक , रामेछाप । २०७२ सालमा आएको विनासकारी भूकम्पको कारण ध्वस्त भएको सुन्दर पर्यटकीय नगरी जिरी बजारमा दुईवर्ष पछि फेरि चहलपहल देखिन लागेको छ । रामेछापसँग सीमा जोडिएको दोलखाको यो बजारले पुरानो स्वरुप बदल्दै नयाँ स्वरुपमा उठेको छ । भूकम्पले ध्वस्त भएको जिरी बजारमा घरदेखि सडकसम्म नयाँ संरचना बनेका छन् । बजार पुरै नयाँ […]
दिनदिनै चिसो बढ्दैछ । चिसो बढ्दा सबैभन्दा बढी सास्ती भनेका रोगी, बुढाबुढी, बालबच्चा र सुत्केरीले झेल्नुपर्छ । चिसो मौसममा अनेकन शारीरिक समस्याले दुख दिन्छ । यसमध्ये एक हो, श्वासप्रश्वासको समस्या । अर्थात अस्वभाविक सास बढ्नु । स्वाँ-स्वाँ हुनु । सामान्यतया, दम तथा आस्थमाको विरामीलाई स्वाँ स्वाँ हुने गर्दछ । जसले गर्दा छातीबाट सिठ्ठी बजेको जस्तो […]
इन्द्रावती गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष मृत फेला
२ मंसिर, सिन्धुपाल्चोक । जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ मृत फेला परेका छन् । शनिबार बिहान ३ बजे घरबाट निस्किएका वडाध्यक्ष श्रेष्ठ दिउँसो मृत फेला परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार, श्रेष्ठको शव इन्द्रावती नदीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको छ । उनी आफैं नदीमा डुबेका हुन् या हत्या भएको भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले […]